Adobe Proto: Touch Prototyping amin'ny Tablet | Martech Zone
Adobe Proto: Touch Prototyping amin'ny takelakao
Talata, Novambra 22, 2011 Douglas Karr
Adobe nandefa andiany iray an'ny kitiho ny rindranasa mifanaraka amin'ny Android takelaka. Mahafinaritra fa ny Photoshop, Debut, Ideas ary Kuler dia mankamin'ny takelaka ary manatsara azy ireo ho an'ny interface interface, saingy tsy azoko antoka fa tena afaka mamakivaky azy ireo aho ary tena hamokatra (indrindra satria minono amin'ny Photoshop).
Ny fampiharana iray, ampiarahina amin'ny Adobe Creative Cloud tena niavaka tamiko izany Adobe Proto. Ny fahaizana manome tavy mpampiasa interface tsara dia mahatalanjona. Mampiasa izahay LucidCharts dieny izao ary tia ny fahaizan'ny fiaraha-miasa. Na izany aza, Proto dia fampiharana mahavariana… indrindra amin'ny $ 10.
Manantena ny hahita ny Adobe Proto hahatratra ny iPad aho!
Tags: rahona famoronana adobeadobe prototakelaka
Atsaharo ny fiheverana fa fantatro ianao!
'Io no vanim-potoana hiasa
Febroary 4, 2012 amin'ny 4:41 PM
Marketing & vokatra mahatsiravina! Tsy maintsy mampiasa ny serivisy rahona $149/mois ianao vao afaka mizara rakitra amin'ny pc, tsy afaka mitahiry ilay rakitra amin'ny takelakao ianao ary mampiasa sdcard na usbdrive, na mandefa mailaka.
Misy safidy maimaim-poana maro hafa izay mamela anao hanao zavatra mitovy maimaim-poana sy mamindra rakitra maimaim-poana.
Imbetsaka aho no niresaka tamin'ny Adobe, na dia ny mpiasany aza tsy mahalala, manana ekipa android izy ireo, saingy tsy dia mahalala firy, na ny fivarotana mialoha, na ny fanohanana ara-teknika. Farany taorian'ny herinandro 1 dia nahazo mailaka aho milaza fa tsy azo atao ny mizara rakitra ivelan'ny serivisy rahona lafo vidy.
Avy eo, ny 90% amin'ny olona mampiasa azy io dia tsy afaka mampiditra ny rakitra ao amin'ny adobe cloud. Tsy manampy azy ireo ny Adobe, noho izany dia manana olana ara-teknolojia tsy voavaly sy tsy voavaha ny mpampiasa ao amin'ny forum sy fanohanana adobe.
Tokony hanolotra izany maimaim-poana amin'ny 10GB na zavatra hafa izy ireo, tsy fahombiazana ireo fampiharana ireo noho izany antony izany, aza mandany ny volanao.
Febroary 5, 2012 amin'ny 7:06 PM
@google-dff452fb3bf20c4d2d9780305703bb9f:disqus – misaotra betsaka tamin'ny fizarana izany vaovao izany! Tena mampalahelo izany. Manomboka manontany tena aho raha toa ka manana krizy momba ny maha-izy azy ny Adobe na tsia.